“आइ एम इ र साहित्यको बिहे ” : बि.पी विद्रोही – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७५ पुष २१, शनिबार) ०८:३३
जुनकुनै विषयमा पनि अध्ययन गरिनुपर्छ। अध्ययन बिना गरिएका कुरा ,लेखिएका शब्दहरु गफ शिबाय अरु केहि हुदैन । फेसबुकमा देखिएका कुरा र लेखिएका कुराको आधारमा घर बसेर आफ्नो धारणा बनाएर बेकारका बहस गर्नुभन्दा प्रत्यक्ष अध्ययन अनुसन्धान गरेर गरिएका टिका टिप्पणीहरुले बिषयबस्तुको गाम्भिर्यतालाइ अझ प्रस्ट्याउछ।
यसै सन्दर्भमा अहिले पोखरामा चलिरहेको भनिएको साहित्यिक महोत्सवका विषयमा मैले यस अघि नै आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरिसकेको छु । मेरो बुझाइमा त्यो साहित्यिक महोत्सव नभएर साहित्यको ब्यापारिकरण गर्ने मेला हो, त्यसलाइ मैले प्रस्ट भाषामा भनेको छु।
खिचडी महोत्सब हो। किनकी त्यहा साहित्यिक खिचडीलाइ चाहिने नुन, मसला, दाल, चामल सबै मिसिएको छ । त्यो पुरै गलत हो र सबै साहित्यकारहरु गलत हुन भन्ने मेरो आसय कदापी होइन l त्यहा आदरणीय सम्नाननिय साहित्यिक ब्यक्तित्वहरु पनि हुनुहुन्छ । फेरी अग्रजहरु हुनुहुन्छ भन्दैमा उनिहरुको कमजोरीसग सतिजाने कुरा पनि भएन। खास ठाउमा खास विषयमा हो । अग्रजलाइ सम्मान गर्ने त । गलत कुरा त स्विकार्न सकिन्न। मेरो भनाइ को तात्पर्य के हो भने, त्यो प्रवृत्ति गलत छ।
साहित्य साहित्य क्षेत्र किन पुजिबादको दास हुदै छ ? साहित्यले किन गुलामी गर्नु पर्यो दलालहरुको ? मैले यसरी आफ्नो धारणा राखिरहदा मलाइ त्यस बिषयमा अझ गहिरिएर बुझौ भन्ने लागेर आज मेरा एक जना मित्र क्रान्तिकारी मजदुर नेता बिजय अधिकारीलाइ लिएर पुगे, मेला चलिरहेको ठाउ पोखराको फेवाताल किनारमा।
माहोल यस्तो थियो: करिब ३.३० बजे हामी महोत्सवको गेटबाट भित्र प्रबेश गर्यौ चारैतिर बहुरास्टिय कम्पनीका विज्ञापन र एनजिओ/आइनजियोका विज्ञापनले सुसजित लाग्दथ्यो । त्यो कुनै औधोगिक महोत्सव हो । चौरमा करिब दुइ हजार हाराहारीमा मान्छेहरु थिए । केहि चिनेका अनुहारहरु पनि देखिन्थे ।
देसका धेरै साहित्यकार मान्छेहरु त्यहा देख्न सकिन्थ्यो । म अधिकांशलाई चिन्थे, मलाइ चिन्नेहरु कमै थिए । फेवातालपट्टिको मन्चमा चलिरहेको थियो । साहित्यमाथी सेन्सर विषयमा सरस्वती प्रतीक्षा , युग पाठक नयनराज पाण्डेको बहस। केहि बेर मैले पनि सुने बहस । त्यो बहस सुन्दा मनमा लागेको कुरा के भने तपाइँहरु साहित्यमाथी सेन्सरको कुरा गरिरहदा यहा शासकहरुले हाम्रो छाया माथी सेन्सर लगाइरहेको छ ? यो विषय म पनि सोधु झै पनि लागेथ्यो । तर मलाइ त्यो प्रस्नको जबाफ त्यहाबाट पाइदैन र त्यो प्रस्नको उत्तर पाउने थलो त्यहा थिएन ।
दर्शकदिर्घामा खगेन्द्र सङग्रौला लगाएतका थुप्रै अग्रज व्यक्तित्वहरु पनि देखिन्थे । त्यस पस्चात काङ्ग्रेस नेता प्रदिप गिरिको दन्त्यकथा बिसयमा प्रबचन सुरु भयो। बुढाले खगेन्द्र सङ्ग्रौला को प्रस्नको उत्तर दिदै माक्सबाद पनि दन्त्यकथा भएको भन्ने आसयको तर्क प्रस्तुत गरे। गिरिको प्रबचन चलिरहदा हामी बाहिरिने तरखरमा थियौ।फर्कदै गर्दा देखियो, मन्चको साइडमा सेतो फमले कुदिएको “आइ एम इ” को ठुलो विज्ञापन घरी घरी यस्तो लाग्थ्यो, आइ एम इ बेहुला हो साहित्य बेहुली हो त्यहा बिबाह उत्सब चलिरहेछ मान्छेहरु भोज खान गएका हुन। दायापटि पुस्तक प्रदर्सनी रहेछ।
एक पटक सबैतिर नजर लगाएँ , रासिफलदेखी कार्ल माक्सको जिबनीसम्मका पुस्तकहरु देखिन्थे । अधिकास ठुला ब्यापारी , राजनितिग्य पुर्ब कर्मचारीका सस्मरणहरु देखिन्थे । नब प्रतिभा र प्रगतिसिल साहित्यका पुस्तकहरु निकै कम देखिन्थ्यो। त्यहा यस्तो लाग्दथ्यो, साहित्यकारहरु किताब बेच्न आएका हुन। यसरी हामी करिब दुइ घण्टा बसेर फर्कियौ। फर्किए लगतै फेवाताल किनारमा भेटिए नेकपा युवा नेता सन्देश गुरुङl केहि समय उनिसग यसै विषयक रहेर केहि कुराकानी भयो ।त्यस पस्चात हामी हाम्रो गन्तब्य तिर फर्कियौ ।
अन्त्यमा सबै खराब र म मात्र ठिक हु भनेको छैन त्यहाबाट पनि केहि शिक्षा लिन अबस्य सकिन्छ। तर त्यो प्रवृत्ति गलत हो। तपाइले यस लेखलाइ जसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ । बुझ्न तपाईलाइ छुट छ । त्यो तपाईको बुझाइमा भर पर्छ । मेरो भन्नु यति मात्र हो , म साहित्यलाइ असाध्यै माया गर्ने मान्छे हु। साहित्यको बिकासको लागी नै मैले यो बहस चलाइरहेको छु। साहित्यकार भनेको रचना रचेर मात्र भैइदैन। त्यससग जोडिएर आउने गलत प्रवृत्तिहरुलाइ चिर्नु र अग्रजहरुलाइ झकझ्क्याउदै नया प्रतिभाहरुलाइ शिक्षा दिनु महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। त्यहाबाट फर्किए पछि मलाइ के लाग्यो भने हामी साहित्य क्षेत्रलाइ ब्यापारसग जोडेर यो कस्तो अभ्यास गर्दै छौ ? यसले हामिलाइ यसले कहा पुर्याउछ। के यसरी हुन्छ त साहित्यको उत्थान?
(२०७५ पुष २१, शनिबार) ०८:३३ मा प्रकाशित